Magic talisman - empompini ukheshe
Mhlawumbe wabona emzini wothile onjalo yezandla eyayivamile inkomishi elintantayo ethela kusuka zemali yakhe. Abantu abaningi yena enthralls, futhi abaningi ngisho baqonde ukuthi kwakuzokwenziwa kanjani. Eqinisweni, le Hack - chofoza imali - nje enziwe ngezandla zakhe futhi uhlobo umthombo segolide ongashi. Lo mkhiqizo uba kokubili iwuphawu ukuceba nokuchuma kanye kuncike okuletha kumnikazi impumelelo yayo, ibhendi uphumelele ekuphileni futhi ikhanga imali yangempela inqwaba.
Ukuze wenze imali spigot izandla siqu kungaba isipho abangane, izihlobo, osebenza nabo, abaphathi. Lokhu Hack kuyoba isipho esimangalisayo ngoba usuku lokuzalwa noma emshadweni. Ngokuvamile, isikhumbuzo asebenzayo kungenziwa kahle kusetshenziswa isimo ezingaphezu kweyodwa. Yiqiniso, nje ukunika imali imvilophu kuyinto isixazululo evamile kakhulu. I okufana elikhulu kakhulu - ukwenza yezandla banknotes.
Ungakwazi bayakholelwa izakhiwo imilingo we yezandla, noma aphathe ke abakwethembi enempilo, kodwa ukuthi isimo sinjani, into enjalo kungaba abe umhlobiso zokuhlobisa yokuqala noma iyiphi ekhaya noma ifulethi noma enye ukudlala indima yabo yokukhuluma main emaqaqasini ekamelweni. Ngakho, nakuba kuba isikhathi esengeziwe ukukhuluma ngalokho izingxenye kungenziwa ekhiqizwa crane imali ngezandla zabo. Ngokulandelayo, sizobe akutshele mayelana izigaba eyinhloko bumbela. Futhi ungaqiniseka ukuthi akukho eziyinkimbinkimbi ngakho.
esizidingela yokukhiqiza umthombo elintantayo:
Imali - kungaba imali yamaphepha yangempela noma zemali, noma yimuphi iphepha yokufakelwa.
Bowl njengengxenye yendabuko yezandla. Okokuqala okungathatha indawo yalokho nge isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu abavamile.
Metal intambo, okuthiwa wire.
ngethephu enamathelayo kanye ne-glue.
Nokunwebeka polyurethane foam noma Foam.
Skewers ngokhuni noma aluminium ekuphambukeni.
Imali empompini. Master-class ekwenzeni isikhumbuzo
Okokuqala nje, uzokwenza umnikazi inkomishi. Ngenxa yalesi shpazhek injongo eziyisithupha ahambisanayo, futhi phakathi kwabo, ukubeka wire ukuze ingxenye yayo eyenziwa ngaso ngamasentimitha ambalwa ngaphezu ngezinduku. Khona-ke skewers ziboshelwe ngezintambo ngethephu enamathelayo kanye ingxenye goba esele ngaphandle wire i-engela degrees 120. Ngemva kwalokho, sibonga isakhiwo okuholela, thina ukubophela indebe. Ngokuvamile, esikhundleni sokusebenzisa prongs shpazhek ekuphambukeni okuyinto insaliwe phambili futhi unamathele esosweni futhi emuva ekupheleni engonxantathu isibambo unamathele ngaphakathi isitsha. Bese kufika ithuba lika-ibhaluni nge upende igolide, okuyinto thina ukupenda ngokuningiliziwe, simulating crane igolide yemali.
Ngaphambi kokuthi uqale ukupenda, kubalulekile ukuba aphathe umkhiqizo ngotshwala oyosusa lamahwahwa. Ukukhiqiza Umdwebo Kunconywa emgwaqeni noma emphemeni. Uma inqubo oyokwenziwa egumbini, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi kule nqubo kukhona kwesabelo uthuli dusky ukuthi ihlanganisa bonke ubuso kule ndawo. Kufanele zisetshenziswe izingqimba okungenani ezintathu. Ukuze ome ungqimba amaqabunga ngamunye cishe ikota yebahlali ihora noma ngaphezulu. Lapho ukhetha colorant, kubalulekile ukuba acabangele ukuthi ekugcineni kuyodingeka umbala mnyama ngaphezu sikukhombisa isampula.
Khona-ke sakha isinyathelo. A isidlo yakudala esitsheni okuhambisanayo. Kodwa eqinisweni, ungenza isinyathelo zikanhlangothiningi nge emakhoneni eziningi ukuze oyithanda kakhulu. Kusukela ngaphandle, isinyathelo kungacinywa phezu ne zekhofi noma zemali. Khona-ke kumelwe amise lesi mkhiqizo zihambisana bill, ngakho sithola, ngakho ukukusho, umnyombo yemali Thepha ekusakazeni. Khona-ke unamathisele induku kuya isinyathelo. Kubalulekile ukuba badonse imali ukhiqiza umphumela sengathi afafazwe kusukela ke imali. Ukunamathela emhlabeni ibha izikweletu, basonta esikhwameni. Lena esigabeni sokugcina umsebenzi, futhi manje singasho ukuthi okwenza imali Thepha usuphothuliwe.
Izinhlamvu zemali banknotes
Ngaphezu kwalokho, kungenzeka Saucer ehlotshiswe zemali. Ngenxa yale njongo, ukulingana penny evamile ukuthi kufanele ube ngalutho. Futhi, abanye abantu emsebenzini ku empompini imali isetshenziswa zemali kanye izindondo esakhiwe ngezinto zokuhlobisa. Ngokuqondene izikweletu, ingasetshenziswa njengendlela amathikithi "mbumbulu" futhi imali yangempela.
Umshini Perosemnaya ngezandla zakhe: imidwebo kudivayisi
Indlela yokwenza indlu ikati ngezandla
Unyaka wonke abamba ukushisa izandla zami siqu. Winter engadini unyaka wonke evuthayo
Thina thunga izilenge ngezandla zakhe
Izinkondlo yomkhiqizo: uju heather
Karim Fatih, ubani okufanele ube izingane zethu
Indlela ukujabulisa umuntu donsa eside?
Yikuphi ukudla aqukethe isitashi ukuthi uyozinikela
Washers "Whirlpool": libuyekeza Ochwepheshe. umshini wokuwasha "Whirlpool": Izibuyekezo ikhasimende
Ski resort spa isikhungo Arshan (esifundeni sase-Irkutsk) e Buryatia: izikhangibavakashi kanye zokungcebeleka
Motor-imishini Enduro Ukucaciswa, izincazelo kanye nokubuyekeza